Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles waxay soo dhoweynaysaa Nalka Cagaaran ee Socdaalka oo hadda ka yimid Talyaaniga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles waxay soo dhaweynaysaa booqdayaasha Talyaaniga
Seychelles ayaa dhowaan awood u yeelan doonta inay soo booqato booqdayaasha Talyaaniga “Benvenuto” mar kale iyadoo Wasaaradda Caafimaadka Talyaanigu ay siinayso iftiinka cagaaran ee u oggolaanaya muwaadiniinteeda inay u safraan lix waddan oo ka baxsan Yurub.
Wasaaradda caafimaadka ee Talyaanigu waxay u furaysaa marin tijaabo ah oo COVID-free ah oo loogu talagalay "socdaallada dalxiiska ee la kontoroolo" ee ka baxsan Yurub.
Wadadani waxay meesha ka saareysaa baahida karantiilnimada iyadoo ah taxaddar COVID-19 ama imaanshaha ama ka soo noqoshada meeshii loo socday.
Dalxiise 27,289 dalxiisayaal ah oo ka yimid Talyaaniga ayaa booqday Seychelles sannadka 2019, markii ay ahayd suuqa afaraad ee ugu horreeya ee laga soo galo.
Jasiiradaha janada Badweynta Hindiya ee Seychelles waa mid ka mid ah lixda meelood ee aan Yurub ahayn ee muwaadiniinta Talyaanigu u safri karaan iyadoo wasaaradda caafimaadka Talyaanigu u fureyso marin tijaabo COVID-free ah “safarrada dalxiiska ee la kontoroolo” ee ka baxsan Yurub iyada oo aan loo baahnayn karantiil sida COVID -19 taxaddar ha ahaato imaanshaha ama ka soo noqoshada meesha loo socdo.
Khudbaddiisii ​​furitaanka ee bayaan uu u jeediyay Golaha Qaranka ee dalka si loo xuso Maalinta Dalxiiska Adduunka iyo Toddobaadka Dalxiiska Adduunka Arbacadii, Sebtember 29, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska ee Seychelles Sylvestre Radegonde ayaa ku dhawaaqay dhawaaqa “Warka wanaagsan, runtii waa war aad u wanaagsan”.
Isagoo ka faalloonaya ahmiyadda horumarkan cusub iyada oo waddanku u diyaargaroobayo soo -dhoweynta martida ka imaanaysa marinka afaraad ee hormuudka u ah dalxiiska suuq -geynta jasiiradda Badweynta Hindiya, Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska Sherin Francis ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay warkaas, iyadoo leh: “Waxaan nahay Waxaan rajeyneynaa inaan dib u soo dhaweyno martidayada Talyaaniga ah ee xiisaha leh oo caan ku ah soo jiidashadooda iyo 'joie de vivre.'
“Talyaanigu had iyo jeer wuxuu ku raaxeysanayay badeecadaha kala duwan Seychelles waa inay bixisaa, gaar ahaan hoteellada cabbirka dhexdhexaadka ah ee ku saleysan Praslin. Waxay yihiin kuwo aad u xiiso badan waxayna ku raaxaystaan ​​sahaminta jasiiradaha, socdaalada dalxiiska, boodboodka jasiiradaha, socod dheer, cunista iyo ogaanshaha meesha loo socdo guud ahaan. Tiro aad u wanaagsan oo ka mid ah guryahayaga ayaa leh martida soo noqnoqda ee Talyaani ah oo sugaya inay safraan marka iftiinka cagaaran la siiyo. Seychelles sidoo kale waxay ahayd meel loo raadinayo meheradaha Talyaaniga. ”
Dalxiiseyaal 27,289 ah oo ka yimid Talyaaniga ayaa booqday Seychelles sannadka 2019, markii ay ahayd suuqa afaraad ee hormuudka u ahaa, oo ka koobnaa 10% dadka Yurub ka yimid.
Tan iyo marxaladihii ugu dambeeyay ee dib-u-furidda xuduudaheeda 25-kii Maarso ee sannadkan, waxaa loo socdaa wax aan ka yarayn 32 duulimaad oo caalami ah toddobaadkii, iyada oo aan lagu xisaabin duullimaadyada diyaaradda qaranka ee Air Seychelles iyo adeegyada dhowaan bilaabi doona shirkadaha diyaaradaha ee Condor iyo Air France.
Tallaalada COVID ee Carruurta Degdeg Dhakhaatiirta ER dheh